जब देउवाले ओलीसँग हात मिलाउन मानेनन् (भिडियोसहित)
काठमाडौं । कहिले एकअर्काको तारिफ गर्नु त कहिले गाली गर्नु नेताहरूको गुण नै मानिन्छ । एउटै मञ्जमा रहेर भाषण गर्दा पनि मुड सहि चलेको बेला तारिफ गरेर नथाक्ने नेताहरू मुड नचलेका बेला गालीको वर्षा दिन्छन् । यो क्रम प्रमुख राजनीति दलका शीर्ष नेताहरूदेखि तल्लो तहका नेताहरूसम्म चलिरहन्छ । कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको चियापन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लगायत शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए । कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले कांग्रेस पार्टी र सभापति शेरबहादुर देउवाको निकै तारिफ गरेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि नेकपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा भने फरक दृश्य देखियो । जुन दृश्य देख्दा त्यहाँ उपस्थित सबैजना निकैबेर मज्जाले हासेँ ।के भएको थियो त्यस्तो सबैलाई हसाउँने दृश्य ? कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यक्रमस्थल पुगे । नेकपा शीर्षस्थ नेताहरू उभिएको ठाउँमा पुगेका देउवाले सुरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग हात मिलाए । त्यसपछि सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग हात मिलाउँदै माधवकुमार नेपालतिर अघि बढे । नेपालसँग हात मिलाइसकेपछि प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यलाई नमस्कार फर्काए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली नजिकै पुगेका देउवाले बालापन शैली देखाए । प्रधानमन्त्री ओलीले नमस्कार गर्दै देउवासँग हात मिलाउन अघि बढ्दै गर्दा देउवाले भने हात मिलाएनन् । देउवाले हात मिलाउन नमानेपछि ओलीले अघि बढाएको हात पछाडि गरे । र जबरजस्ती देउवाको औंलाका टुप्पा समातेर हात मिलाए । जुन दृश्य देखेपछि मञ्चमा उपस्थित शीर्ष नेताहरू चकित पर्नुका साथै हाँसे ।देउवाले किन मिलाएनन् ओलीसँग हात ? प्रधानमन्त्रीसँग हात नमिलाई अघि बढेका देउवाले झलनाथ खनाल लगायत अन्य नेताहरूसँग हात मिलाए । त्यसपछि उनी ओलीसँगै ड्यासमा बसे । मञ्चमा बसेका देउवाको संकेत आकाशतिर थियो । जहाँ उनले यस्तो घाम हुँदा पनि राम्रो टेन्टको व्यवस्था नगरेको संकेत थियो । टेन्टको व्यवस्था गरिए पनि अगाडिबाट सिधै देउवा, ओली लगायत मञ्चमा आसिन नेताहरूको मुखमा घाम परेको थियो । देउवाले ओलीतिर संकेत गर्दै राम्रो टेन्टको व्यवस्था गर्न नसकेको जनाए । दुवै जनाको हाउँभाउ हेर्दा निकै मजाक पारामा थिए । त्यही भएर उनले ओलीसँग हात नमिलाएको हुन सक्छ ।[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ZwJzW5qFxbk[/embed]
२९ आश्विन २०७६, बुधबार १८:५२
काठमाडौं । कहिले एकअर्काको तारिफ गर्नु त कहिले गाली गर्नु नेताहरूको गुण नै मानिन्छ । एउटै मञ्जमा रहेर भाषण गर्दा पनि मुड सहि चलेको बेला तारिफ गरेर नथाक्ने नेताहरू मुड नचलेका बेला गालीको वर्षा दिन्छन् । यो क्रम प्रमुख राजनीति दलका शीर्ष नेताहरूदेखि तल्लो तहका नेताहरूसम्म चलिरहन्छ ।
कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको चियापन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले कांग्रेस पार्टी र सभापति शेरबहादुर देउवाको निकै तारिफ गरेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि नेकपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा भने फरक दृश्य देखियो । जुन दृश्य देख्दा त्यहाँ उपस्थित सबैजना निकैबेर मज्जाले हासेँ ।
के भएको थियो त्यस्तो सबैलाई हसाउँने दृश्य ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यक्रमस्थल पुगे । नेकपा शीर्षस्थ नेताहरू उभिएको ठाउँमा पुगेका देउवाले सुरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग हात मिलाए । त्यसपछि सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग हात मिलाउँदै माधवकुमार नेपालतिर अघि बढे । नेपालसँग हात मिलाइसकेपछि प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यलाई नमस्कार फर्काए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली नजिकै पुगेका देउवाले बालापन शैली देखाए । प्रधानमन्त्री ओलीले नमस्कार गर्दै देउवासँग हात मिलाउन अघि बढ्दै गर्दा देउवाले भने हात मिलाएनन् । देउवाले हात मिलाउन नमानेपछि ओलीले अघि बढाएको हात पछाडि गरे । र जबरजस्ती देउवाको औंलाका टुप्पा समातेर हात मिलाए । जुन दृश्य देखेपछि मञ्चमा उपस्थित शीर्ष नेताहरू चकित पर्नुका साथै हाँसे ।
देउवाले किन मिलाएनन् ओलीसँग हात ?
प्रधानमन्त्रीसँग हात नमिलाई अघि बढेका देउवाले झलनाथ खनाल लगायत अन्य नेताहरूसँग हात मिलाए । त्यसपछि उनी ओलीसँगै ड्यासमा बसे । मञ्चमा बसेका देउवाको संकेत आकाशतिर थियो । जहाँ उनले यस्तो घाम हुँदा पनि राम्रो टेन्टको व्यवस्था नगरेको संकेत थियो ।
टेन्टको व्यवस्था गरिए पनि अगाडिबाट सिधै देउवा, ओली लगायत मञ्चमा आसिन नेताहरूको मुखमा घाम परेको थियो । देउवाले ओलीतिर संकेत गर्दै राम्रो टेन्टको व्यवस्था गर्न नसकेको जनाए । दुवै जनाको हाउँभाउ हेर्दा निकै मजाक पारामा थिए । त्यही भएर उनले ओलीसँग हात नमिलाएको हुन सक्छ ।
kp oli, sherbahadur dauba, केपी शर्मा ओली, चियापान, नेकपा, नेपाली काँग्रेस, नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा
Prevपक्राउ पुर्जीबारे सांसद् पार्वत गुरुङ भन्छन्, ‘त्यो पुरानो स्थानीय तहकै केस हो’
३ दिन प्रहरी हिरासत बसेका ठाकुरको प्रश्न, ‘विना कारण किन थुनामा राखियो ?’Next
नेकपाको आधिकारिकता विवाद कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड
नेकपामा अराजकता र अनुशासनहिनता मौलाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा चिन्ता
मौसम खराबीका कारण देउवा चढेको हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण
नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
महाधिवेशनसम्म आफू नेकपाको पहिलो अध्यक्ष र दाहाल द्वितीय अध्यक्ष रहेको ओलीकाे दाबी
नेकपाबारे भिन्न मत : कोही आन्दोलनमा, कोही पार्टी फुट बचाउने अभियानमा